Big Data Analytics Kambani - Chii chinonzi Big Data - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Big Dhata Yekuvandudza Services
Chii chinonzi Big Data?
Nekushanduka kweinternet uye akasiyana matekinoroji ezera idzva, data hombe uye mashandisiro ayo ari kupupurira kuwedzera kudiwa. Mabhizinesi nekufamba kwenguva anounganidza seti yeruzivo, iyo pakuongorora inogona kuratidza zvakatemwa nezvemaitiro evatengi uye hukama hwayo. Analytics inoita kuti zvikwanise kuchengetedza iyi seti yeruzivo uye kuigadzirisa kuti uwedzere kuongorora kudzika kwebhizinesi. Inobatsirawo kutarisa mamiriro azvino ebhizinesi uye kufanotaura kufanotaura kwakavakirwa pane seti yekutarisa.
Yechokwadi-nguva mabhenefiti kumabhizinesi
Iko kusimba kwedata hombe hakurarame muhuwandu hwemashoko akaunganidzwa pamanyuko, asi nemabatiro anobudirira emabhizimusi kushandisa ruzivo urwu mukuongorora maitiro azvino nekushandisa mune ramangwana. Sekureva kwaGartner, anopfuura 75% emakambani ari kuronga kuisa mari mune izvi. Nekudaro, zano harisi rekungoongorora maitiro asi zvakare kuiongorora nekukurumidza kuchengetedza kugona. Iine huwandu hwakawanda hwetekinoroji yepamusoro-simba inowanikwa, hunyanzvi huri mukutora kweruzivo rwaunoda.
Zvichienderana nekukanganisika kweruzivo rwakachengetwa, zvakanakira zvinogona kuve zvakagadzirwa-zvakare. Mamwe mashoma anosanganisira:
Kurwisa zviitiko zvekubiridzira zvemari mumatanho ekutanga nekunyatso kushandisa ekufanofungidzira mamodheru zvichibva pane ese apfuura uye aripo maseteti edata. Izvo zvaita kuti kuzivisa kubiridzira kuve nyore, iine chaiyo-nguva ongororo yeese akarongeka uye asina kurongeka data.
Inopa business intelligence iyo inowedzera kuderedza mari uye inovandudza kushanda kwekushanda. Analytics inogona kupa nzwisiso pamhedzisiro yezvakasiyana zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa, nokudaro zvichitungamira maindasitiri kukuita sarudzo zvine hungwaru.
Neye yapfuura ongororo yezvigadzirwa zvinotangisa uye mutengi mhinduro, zvakasanganiswa neicho chaicho-nguva musika ongororo, zvave nyore kumabhizinesi kuti anzwisise mashifts mune kudiwa uye kupihwa. Nekudaro, ichigonesa smart mazano ezvigadzirwa zvitsva zvinopihwa simba nekuongorora zvinodiwa nevatengi, zvido uye maitiro ekutenga.
Kugadzirisa kudiwa kuri kuwedzera kwe guru Data analytics iwo mabhizinesi anokwanisa kuwedzera mukuita kwavo kwemazuva ese, timu yedu pa NewGenApps inoita kuti tigare nhanho kumberi nguva dzose nekubatanidza hunyanzvi hwemumba tichibatana nevatungamiriri vetekinoroji kusanganisira Microsoft uye Google.
Zvishoma zvezviitiko zvedu zvinochinja zvinoisa simbiso pa:
Kuzvidzidzira-kudzidza kutumira nzira ichibatanidza machine learning uye makuru data matekinoroji
Yakagadziriswa kugona kuronga kuronga fungidziro
Kugadzira hunyanzvi hwesimba hwakasimba zvakakwana kubata makuru uye akasiyana marudzi e data seti
Huru dhata maturu ekuongorora manzwiro pane twitter
Kuvaraidza kwevhiki nevhiki
Anwendung ine curated runyorwa kunze kweBig Data